Ikomidi elithintekayo lekomiti liye lavuma ukuba ibhajethi ivume i-NASA yacela ukuba ihlawulwe imali engama-19.5 yezigidigidi ze-2017. Kodwa imali ihamba kunye nomtya ococekileyo onobugcisa: Beka abantu kwi-Mars - kwiminyaka engama-25 ezayo.
NgoSeptemba 21, iKomidi yeSenate yezoRhwebo, iNzululwazi, kunye nezothutho ivume uMthetho wokuGunyazisa iNguqulelo we-NASA ka-2016 ngokuvota kwezwi elifanayo.
Abaxhasayo bipartisan bendlalili banethemba lokuba i-$ 19.5 yezigidi zezimali ziya kwenza i-NASA ingene ngokungafihlisiyo kwizinto ezingaziwayo zolawulo olutsha loongameli kunye nemali eyaneleyo yokuqhubeka nomsebenzi wayo oqhubekayo eMars.
"Siye sabona kwangaphambili ukubaluleka kokuzinza nokubikezela kwi-NASA kunye nokuhlola kwendawo-ukuba nayiphi na enye intshintsho ekulawuleni, siye sabona intshutshiso enokubangelwa ukucinywa kweenkqubo ezinkulu," kusho uSen. Ted Cruz (R-Texas), umxhasi okhokelayo wesikhokhelo. "Impembelelo ngokwemisebenzi elahlekileyo, impembelelo ngokuchithwa kwemali ibalulekileyo."
Ngelixa i-bill bill isagunyazwa yiNational Senate kunye neNdlu yabameli, iimpawu zokuhamba kunye nokumisela zilungile. Uhlahlo lwabiwo-mali lwama-19.508 wezigidigidi ze-NASA kunyaka-mali ka-2017 luyimali efanayo evunyiweyo yiNdlu kunye neeNteti zeeKomiti zoLwabiwo-mali kwaye idibana ne-19 billion yezigidi ezibandakanyiweyo kwisiphakamiso sesabelomali sonyaka ka-Obama.
Emva kweminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu emva kokuba uMongameli uKennedy anselele isizwe ukuba abeke indoda kwinyanga, iSenate inzima ukuba i-NASA ibeke abantu eMars, "kutsho uSen Bill Bill (D-Florida), usezingeni likaDemokhrasi kwikomiti.
"Izinto ezibalulekileyo esizibekelele kwi-NASA kulo mqondiso-mali uqale ekuqaleni kwexesha elitsha lase-American spaceflight."
Uhambo oluthile lweMaritz Trip
Okubaluleke kakhulu, ibhajethi ifuna iNASA ukuba ihlakulele "isakhelo" sokuhlola indawo "eya kubandakanya" ... isicwangciso esihlangeneyo sokuhlola, isayensi kunye nezinye iinjongo kunye neenjongo zeprogram ye-United States yoluntu yokuhlola indawo kunye nexesha elide. Injongo yemisebenzi yabantu kufuphi okanye kwi-Mars kuma-2030s ... "
Ngo-Oktobha 2015, umhloli-jikelele we-agency yomgcini wachaza kwiCongress ukuthi iNASA yayilungelelaniswe imingeni kunye neengozi ezibandakanyeka ekuthumeleni abantu kuMar nokuzibuyisela ziphila.
Kule ngxelo, umhloli jikelele ugxeke iNASA ngenxa yokungaphumeleli kwayo ukunikezela iingcali ukuba zisebenze ngokukodwa ekujonganeni nobomi obuninzi nokukhuseleka kwezona zinto ziza kubhekana nohambo olude oluyiminyaka emi-3 ukuya eMars kunye nasemva. "Ukuthunyelwa kweMars kunye nomva kuya kuthatha ubuncinane iminyaka emithathu, kodwa ubude bokuhlala kwirejista ye-NASA yokutya kwangaphambili kuphela iminyaka eyi-1.5 kuphela."
Ekuphenduleni, abenzi bomthetho bangezelele i-" Nense of Congress " kumlinganiselo we-NASA wenkxaso-mboleko yokugxininisa kwi-agrari yesikhala esithi "ukuqhubela phambili i-teknoloji ye-propulsion iya kuphucula ukuhamba kwee-Mars kwaye inokunciphisa ixesha lokuhamba eMars kunye nokunciphisa iingozi zezempilo ze-astronaut, ukunciphisa amayeza ukuchithwa, iimveliso, kunye nobukhulu bezinto ezifunekayo uhambo. "Ngamanye amazwi, bafumane apho kwaye babuyele ngokukhawuleza okanye bayalibale.
Kwaye ezinye ezimbalwa ezibonakalayo
Iziganeko ezikhethekileyo zeengxowa-mali: i-$ 4.5 yezigidigidi zokuhlola indawo, phantse iibhiliyoni ezi-5 zezigidi zemisebenzi, kunye ne-5.4 yezigidigidi ze-sciences zendawo.
Umthetho-mali ugcina imali yokuxhasa i-NASA ye-$ 1.4 billion yezicwangciso zokubambela abantu kwi-asteroids nokubuyisela iisampula ngo-2021.
Nangona kunjalo, kufuneke ukuba i-NASA ihlale ithumela iingxelo ezibonisa inkqubela phambili kwiprojekthi ukwenzela ukuba zilungele ukuqhubeka nenkxaso.
I-NASA ithi imishini eyenziwe ngabantu kwi-asteroids iya kuba "indawo engqina" yohambo oluya ku-Mars ngaphezu kokunceda oososayensi baphando ukuba iiplanethi zenziwe njani nendlela ukuqala ngayo ubomi, kunye nokuphucula ukuqonda kwethu nge-asteroids ezinokuchaphazela umhlaba.
Ekugqibeleni, ukhathele ukubabona begibela kwi-International Space Station (ISS) kunye nokubuya kwi-spray-rustiki eyenziwe yiRussia eqhutywe yi-cosmonauts yaseRussia, ibhilikhwe idinga ukuba iNASA iqale ukuvala ama-astronauts ase-US kwi-ISS kwiindawo ezizimeleyo ezivela kumhlaba waseMerika ngaphaya kwexesha ekupheleni kuka-2018.
Emva kweminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu emva kokuba uMongameli uKennedy anselele isizwe ukuba abeke indoda ngenyanga, iNational isingeni iNASA ukubeka abantu kwi-Mars.
Izinto eziphambili kwi-NASA kulo mqondiso-mali uqale ukuqala kwexesha elitsha lase-American spaceflight, "watsho iFloren Sen uBill othembekileyo, u-Democrat ophezulu kwi-panel panel.
Ngaba i-Nostradamus yayichaza ukuphela kwehlabathi?
Ukuphefumlela iiNgqungquthela zokucula Ukusebenzisa iMigca yemiSebenzi
12 Iilwandle zaseLwandle lwasePacific
Abamkelwayo kwi-University of Texas